Waa maxay Cannabinoids? • Dawooyinka Inc.eu | Wiki
Isticmaalka Mukhaadaraadka EncyclopediaBogga ugu weyn Isticmaalka Mukhaadaraadka Encyclopedia Cannabinoids
Xashiishad Xashiishad Cannabin
A cannabinoid waa nooc ka mid ah xeryahooda kiimikada kaladuwan ee u dhaqma dhakhaatiirta cannabinoid, oo sidoo kale loo yaqaan nidaamka endocannabinoid ee unugyada wax ka beddelaya sii deynta neurotransmitters maskaxda. Cudurka loo yaqaan 'ligands' ee borotiinnada soo dhoweynta ah waxaa ku jira endocannabinoids dabiici ahaan ay soo saareen xayawaannada jidhka ku jira; phytocannabinoids laga helay xashiishadda iyo dhirta kale; iyo cannabinoids isku-darka, oo si farshaxan loo sameeyay.
Nooca ugu xiisaha badan ee cannabinoid waa phytocannabinoid tetrahydrocannabinol (THC), oo ah walaxda asaasiga u ah firfircoonida daroogada cannabis. Cannabidiol (CBD) waa qeyb kale oo muhiim u ah geedka. Waxaa jira ugu yaraan 113 kaladuwan cannabinoids kala duwan oo laga soocay xashiishadda, kuwaas oo muujinaya saameyn kala duwan.
boostada hore: CBDA
boostada soo socota: Qosol qosol